Banyere Anyị - Beijing Convista Flow Control Equipment Co., Ltd.
A na-arara CONVISTA maka nyocha na ịnye ụdị ụdị njikwa ihe niile dị ka Valves, Mmetụta na njikwa, Nfuli na akụkụ ndị ọzọ metụtara & ihe dịka Flanges & Fittings, Nzacha & Nzacha, Nkwonkwo, Flow Mita, Skids, Nkedo & ibe ya bụrụ ihe wdg.
CONVISTA na-adabere na teknụzụ ndị ọkachamara na ọrụ magburu onwe ya iji nye nchekwa nchekwa, nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi. Ihe ngwọta a nwere ike inye ha Valves, Valve actuation & Controls, Nfuli maka ngwa ndị kacha sie ike n'ofe Pipeline Mmanụ na Gas, Nkọwapụta & Petrochemical, Chemical, Coal Chemical, Conventional Power, Mining & mineral, Nkewa nke ikuku, Nrụpụta, Mmiri Dring & Mmiri mmiri mmiri na nri na ọgwụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche dị iche iche na-apụ apụ.
CONVISTA bụ onye na - eweta ngwaahịa mba ofesi nke Valves, Valve na-arụ ọrụ & Njikwa, Nfuli na ihe ndị yiri ya maka mpaghara ngwa ndị a
Mmiri na-eme ihe ike na ihe mgbawa
Mmiri dị ọcha ma ọ bụ nke rụrụ arụ
Transportgbọ njem siri ike
Mmiri na-emebi emebi na viscous
Mmiri / ngwakọta siri ike na slurries
Ihe omume azụmahịa na ọrụ mmekọrịta ọha na eze na-elekwasị anya n'ịhụ na-adigide, maka ịchekwa ike na mmekọrịta enyi na gburugburu ebe obibi na-ahụ ogologo oge maka gburugburu ebe obibi na mmadụ.
CONVISTA na-akwado ebumnuche nke Kyoto Protocol ma tinye nnukwu uru na arụmọrụ kacha mma maka ngwaahịa na teknụzụ niile. Tụkwasị na nke ahụ, a na-ahazi usoro ọrụ anyị na gburugburu ọrụ anyị iji chọọ obere ume na obere ihe omume dị ka o kwere mee.
Ahụike na nchekwa nke ọrụ maka ndị ọrụ
Iji hụ na nchekwa kachasị na ebe ọrụ, CONVISTA akọwapụtala ụkpụrụ nduzi EHS nke aka ya (Ahụike na nchekwa gburugburu ebe obibi) ma na-ezutekwa ụkpụrụ mba na nke ụwa.
Bebụ onye nrụpụta kasịnụ tụkwasịrị obi maka ngwa njikwa maka ndị ọrụ ụwa
Onye nchekwa, nchekwa nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi
Mgbe niile esi ọnwụ na-eju afọ ahịa na ezi obi, rigorous, ọkachamara na oru oma ọrụ
Na-agbaso nyocha zuru oke nke ndị na-eweta ngwaahịa, maka ebumnuche nke imekọ ihe ọnụ na mmeri-mmeri
Na-ekwusi ike mgbe nile n'ịzụlite otu ndị nwere nkà na ịnụ ọkụ n'obi, ihe ịma aka na agụụ
Were n'Ọrụ bụ anyị ndabere na isi. Convista dabere na onye ọrụ anyị-ndị a na-eme Convista uru, na-agbaso nchekwa arụmọrụ ngwaahịa yana ntụkwasị obi, na ịdị ọcha, ezi obi, yana ịkwanyere onye ọ bụla bara uru, ụbọchị site n'ụbọchị. Were n'Ọrụ bụ comer nkume nke Convista, n'otu oge ahụ, Convista tụkwasịrị obi ime ka onye ọ bụla nwee ihe ịga nke ọma n'otu n'otu. Ntinye nke Convista na teknụzụ kachasị ọhụrụ, usoro yana njikwa njikwa na-eme ka onye ọ bụla na-egwu egwu ya na-agbatị.
Ọrụ Nchedo, Onye Ọrụ Ahụike
Convista gwụrụ iji hụ na ọrụ ebe nchekwa na ahụike. Anyị na-aga n'ihu na-emeziwanye kwa afọ site na afọ n'akụkụ a. Anyị na-ebute nchekwa anyị ọrụ na ọdịbendị nzukọ anyị, anyị na onye ọrụ na-arụkọ ọrụ maka nchekwa na ahụike dị mma, anyị na-atụle nchekwa na ahụike na ọrụ ọ bụla anyị, dabere na nke ahụ, anyị na-arụ ọrụ oge niile ma hụ na anyị ghọtara na ibu ọrụ iji dozie iche ihe ize ndụ.
Anyị na-ehiwe ma zụlite usoro nlekọta ahụike na ahụike, ezigbo nchekwa nchekwa, akụrụngwa na nyocha ahụike mgbe niile na-ahụ ka ebe ọrụ dị mma yana ndị ọrụ ọrụ. Convista guzobere sistemụ njikwa ahụike na nchekwa, usoro njikwa gburugburu, ọ bụ iji nye onye ọrụ anyị ebe ọrụ nchekwa.
Ọzụzụ Ndị Ọrụ na Nkwalite iji Gbaa Ndị Ọrụ Nkwado ume ka Ha Na-egwupụta Ike Ya
Anyị na-etinye aka mgbe niile iji nye onyinye zuru oke na iji ihe niile kachasị mma. Anyị na-eme ka onye ọ bụla na-arụ ọrụ ụfọdụ atụmatụ mmepe ọrụ dabere na ọnọdụ ha. Anyị na-enye nkà ọzụzụ n'ihu akara ọrụ, na-enye management ọzụzụ management, na-enye eteufọk ogo ọmụmụ technician mkpara wdg ndị a niile na-enyere onye ọ bụla mkpara keukwu ibu na obere oge.
Amatala ma too ha
Kwa afọ anyị were ndị kacha mma ọrụ nkà na-eduga ọrụ n'ihu akara ọrụ dị ka ẹkesikpede, ma na-enye
ego nye onye ọ bụla n’ime ha kwa ọnwa na kwa afọ. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị na-appraise àgwà merela agadi onye na
akụrụngwa na - ejigide onye ọ bụla ma nye ha ego.
Nzụlite anyị na-emepe emepe bụ mbido azụmahịa ọnụ, kekọrịta mkpụrụ.
Anyị na-eche, Convista dị ka ezinụlọ karịa ụlọ ọrụ, ndị ọrụ anyị bụ ndị ezinụlọ, ọ na-agba otu uru na ebumnuche azụmahịa. Zute uru ndị ọrụ, otu ndị otu ụlọ ọrụ wee mepụta ụlọ ọrụ na-emepe emepe na nkwalite n'ọtụtụ ebe. Onye ọrụ gị na ụlọ ọrụ guzo na ịkekọrịta mkpụrụ osisi mmalite.
Kwa afọ Convista na-eme ememme Oge opupu mmiri, na-ekele nke ọ bụla n'ime onyinye ndị otu.